Madaxweynaha dalka Turkiga oo xalay gaaray Jamhuuriyadda Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan ayaa xalay gaaray caasimadda dalka Jabuuti, isagoo ka yimid dhanka dalka boqortooyda Sacuudi Carabiya oo uu uga qeybgalay aaska boqorkii hore ee dalkaas, Cabdalla Bin C/caziiz oo habeeno hore ku geeriyooday magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaas.
Markii uu xalay madaxweyne Erdogan gaaray Jabuuti ayuu la kulmay madaxweynaha dalkaas, Ismaaciil Cumar Geelle iyo mas’uuliyiin kale oo reer Jabuuti.
Madaxweynaha Turkiga oo ay la socdaan xubno farabadan oo ka tirrsan dowladda iyo ganacsato maalqabeeno ah ayaa maanta kulamo dheeraad ah la yeelan doona madaxda dalka Jabuuti, iyagoo ka wada hadlaya xiriirka labada dal, ganacsiga iyo arrimo kale.
Reccep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale maanta hadal u jeedin Golaha Baarlamaanka Jamuhuuriyadda Jabuuti.
Madaxweynaha Turkiga ayaa ku guda jira booqasho uu ku kala bixinayo in ka badan todabn dal oo ka tirsan qaaradda, Afrika, waxaana meelaha laga sugayo ka mid ah Soomaaliya.